Delivery ပန်းစည်း№222မော်စကိုတွင် - ပန်းပွင့်ကိုမှာယူပါ
60 စင်တီမီတာ 70 စင်တီမီတာ
Delivery ~ 1h ။ မိနစ် ၃၀ ။မော်စကိုတွင်အခမဲ့
အနံ 70 စင်တီမီတာ
အမြင့် 60 စင်တီမီတာ
Bush chrysanthemum - 51 pcs ။
ပန်းအလှပြင်သူ၏အလုပ်နှင့်ပတ်သက်။9သုံးသပ်ချက်များ:
ကို Dmitry 29-04-2020
အလွန်ကောင်းတဲ့နှင့်ယဉ်ကျေး, သိမ်မွေ့။ အဆိုပါပန်းစည်းတောက်ပပြီးအရသာဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာဆောင်သို့ပန်းစည်းများကိုသယ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်စီစဉ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်နောက်ဆုံးအချိန်၌အနီရောင်မဟုတ်ဘဲအဖြူရောင်နှင်းဆီပန်းများသည် ပို၍ စတိုင်ကျမည်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။ ငါအော်ပရေတာကိုခေါ်ငါချက်ချင်းဖြန့်ဝေနှင့်ဝန်ပိုကောက်အတွက်နောက်ထပ်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ re- အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
က Igor 16-05-2019
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏နှစ်ပတ်လည်နေ့အတွက်သူတို့သည်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်သစ်သီးများကိုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ သူမသည်ဝမ်းသာခဲ့သည်! ပန်းစည်းသည်အလွန်လှပပြီးအသီးအားလုံးသည်လတ်ဆတ်ပြီးသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြင့်ထုပ်ထားသည်။
ဒီအွန်လိုင်းစတိုးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ဘာကိုရွေးရမှန်းမသိခဲ့ပါဘူး peonies ၏များစွာသောမျိုးကွဲရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ပန်းအလှပြင်ဆိုင်မှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်မတ်လ ၈ ရက်နေ့အတွက်အထူးပန်းများကိုကောက်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!))
ရာသီမကုန်ခင်မှာမင်းမှာ tulips တွေရှိနေလို့ဝမ်းသာလိုက်တာ။ အရာအားလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပို့လိုက်ပြီ
ဤနေရာတွင်သာအစာရှောင်ခြင်းပေးပို့အမြဲတမ်းလတ်ဆတ်သောပန်းပွင့်။ အဆိုပါပန်းစည်းရောက်ရှိလာကြောင်းဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှမ။ ဆက်လက်ပြီးရှိသည်!
နှင်းဆီပန်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ယောက္ခမကတကယ်ကြိုက်တယ် သူမနှစ်သက်ဖို့ခဲယဉ်းသော်လည်း ထိုရနံ့ပါတကား! ထိုအခါအရောင်အလွန်ပြင်းထန်သည်။ အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်
စာရေးသူရဲ့ပန်းစည်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဒါကမှော်အတတ်တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော့်ဇနီးကအံ့အားသင့်သွားတယ်လို့ပြောတာကဘာမှမပြောရဘူး။ peonies, tulips နှင့် iris ၏တစ် ဦး ကအံ့သြဖွယ်ပေါင်းစပ်။ သင်၏ပန်းအလှပြင်သူသည်ထိပ်တန်းအဆင့်ပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ဘုရ်ှသည်ထ - 29 pc ။
ရုပ်ရှင် -2pcs ။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ချစ်ခင်ရင်းနှီးသောသူအားမည်သည့်လက်ဆောင်ကိုပေးရမည်နည်းဟုတွေးကြသည်။ ဤပန်းစည်းသည်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ပါသည်။ ရောင်စုံမှုန်ရေမွှားနှင်းဆီ ၂၉ လုံးပါသောပန်းစည်းသည်မိခင်၊ ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး၊ သူငယ်ချင်းတစ် ဦး သို့မဟုတ်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ မှာထားပါ။ ဤပန်းစည်းသည်လက်ခံသူကိုပြုံးပါလိမ့်မည်။ အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှုကသင့်ကိုပျော်ရွှင်စေသည်
8060 XNUMX ₽ သက်တံ
ဘုရ်ှကအမြတ်အစွန်း - 49 pcs ။
5720 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
Eustoma (Lisianthus, ဂျပန်နှင်းဆီ) -9pcs ။
Gerbera - 11 pc ။
6900 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
နှင်းဆီ -7pcs ။
7 Eltoro နှင်းဆီပန်းနှင့်စိမ်းလန်းစိုပြေရေး၏စာရေးသူပန်းစည်း။
1980 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
Chrysanthemum - 10 pc ။
8580 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
Bush chrysanthemum - 15 pcs ။
15 မှုန်ရေမွှား chrysanthemums ၏ပန်းစည်း
4900 XNUMX ₽ 15 မှုန်ရေမွှား chrysanthemums ၏ပန်းစည်း
နှင်းဆီ - 19 pcs ။
ရုပ်ရှင် - 1 pcs ။
3952 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
ဘုရ်ှသည်ထ - 19 pc ။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ချစ်ခင်ရင်းနှီးသောသူအားမည်သည့်လက်ဆောင်ကိုပေးရမည်နည်းဟုတွေးကြသည်။ ဤပန်းစည်းသည်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ပါသည်။ ရေမှုန်ရေမွှား ၁၉ နှင်းပန်းစည်းသည်မိခင်၊ ချစ်မြတ်နိုးရသူ၊ သူငယ်ချင်းတစ် ဦး သို့မဟုတ်သင်ချစ်ခင်သူတစ် ဦး အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ မှာယူပါ။ ဤပန်းစည်းသည်လက်ခံသူအားပြုံးသွားစေမှာဖြစ်ပြီးအခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းကသင့်ကိုနှစ်သက်စေမှာပါ။
5980 XNUMX ₽ နူးညံ့ကြင်နာမှု
နှင်းဆီ -9pcs ။
1390 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀